Oge Ọgụgụ: 5 nkeji Omenala na oge a, serene na hectic, China bụ otu n'ime mba kachasị adọrọ mmasị inyocha, karịsịa ụgbọ okporo ígwè. Kwado njem na China nwere ike bụrụ ihe na-agwụ ike, ya mere anyị gbakọtara 10 Atụmatụ maka otu esi aga ụgbọ oloko gaa China. From packing to…
Oge Ọgụgụ: 7 nkeji Ala nke akụkọ mgbe ochie, Dynasties, ọdịbendị, na ndị mmadụ na-ewu nnukwu anwansi China, ulo nke 10 ebe kachasị mma iji gaa China. Ebe ọ bụla na-adọrọ adọrọ, na-akọ akụkọ mgbe ochie na okwute okwute ọ bụla, akwa, na pristine mmiri nke 1000 ọdọ mmiri. Nke na-esote 10 ọtụtụ epic…
Oge Ọgụgụ: 7 nkeji Ezumike ezumike ezinụlọ na Europe nwere ike ịmasị ndị nne na nna na ụmụaka nke afọ ọ bụla ma ọ bụrụ na ị hazie ya nke ọma. Europe bu ala ulo uku na akwa mmiri, Ogige ntụrụndụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na ebe a na-echekwa ebe ụmụ agbọghọ na ụmụ nwoke nwere ike ime ka hà bụ ụmụ eze na…